ကံဆိုး မှု သေးေ သးလေး တွေ ရဲ့ နော က် မှာ ကံကောင်း မှု အကြီးစားတွေ ရှိနေတယ် – Shwewiki.com
ကံဆိုး မှု သေးသေးလေး တွေ ရဲ့ နောက် မှာ ကံကောင်း မှု အကြီးစားတွေ ရှိနေတယ်
တစ်ခါ က နတ်သားကြီး တစ်ပါးနဲ့ မြေးနတ်သားငယ် လေးဟာ လူ့ပြည်ကို အလည် အပတ် ဆင်းလာ ကြသတဲ့ ။ နေဝင်ချိန် ရောက်လို့ ခရီးဆက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ရွာတစ်ရွာ ကိုဝင်ပြီး အိမ်ကြီး အိမ်ကောင်း တစ်အိမ်မှာ “ ကျွန်ုပ်တို့ မြေး အဘိုးကို ဒီ တစ်ည ဒီအိမ် မှာ တည်းခိုခွင့် ပေးပါ ” လို့ ခွင့်တောင်း တော့တယ် ။
ချမ်းသာ လွန်းပေမယ့် သဘောထား ချို့တဲ့တဲ့ အိမ်ကြီး ရှင်တွေဟာ နတ်သား နှစ်ပါး ကို အိမ်ထဲမှာနေခွင့် မပေးဘဲ အေးခဲ မှောင်မိုက် နေတဲ့ ဂိုဒေါင် ထဲမှာပဲ နေခွင့် ပေးလိုက် သတဲ့ ။
စားဖွယ် သောက်ဖွယ် အလျှံ ပယ် ရှိနေတာ တောင်မှ နတ်သား နှစ်ပါးကို ထမင်း တစ်စေ့ ရေ တစ်စက် လေးတောင် တိုက်ဖော် တောင်မရဘူးတဲ့ ။ အေးခဲနေတဲ့ အခန်းမှာ ဆာလောင် နေတဲ့ နတ်သား ကြီးဟာ ဂိုဒေါင်ရဲ့ ကြမ်းပြင်က အပေါက်လေးတွေကို ဖာထေး ပေးနေတာကို နတ်သား ငယ်လေးက သဘော မကျဘူးပေါ့ ။
“ အဲဒီလောက် သဘောထား ညံ့ဖျင်းတဲ့ မိသားစု ကို ဘာကြောင့် ကူညီ နေရတာလဲ ” လို့ မကျေမနပ်နဲ့ မေးလိုက်တဲ့ အခါမှာ “ အချိန် တန်ရင် အကြောင်းရင်း သိပါလိမ့်မယ် ” လို့ ပြန်ဖြေ လိုက်သတဲ့ ။ နတ်သားငယ် လေးဟာ နတ်သားကြီးရဲ့ အဖြေကို သဘောမကျပေမဲ့ အတွန့် မတက်ချင်တာကြောင့် ဆိတ်ဆိတ် နေလိုက်တာပေါ့ ။
မိုးလင်း ပြီးတဲ့ နောက်မှာ နှစ်သား နှစ်ပါးက အိမ်ကြီးရှင် တွေကို နှုတ်ဆက်ပြီး ခရီးဆက် လာကြသတဲ့ ။ အဲဒီလိုနဲ့ မိုးချုပ် ခါနီးမှာ ဆင်းရဲ ချို့တဲ့တဲ့ အိမ်တစ်အိမ် ရှေ့ကို ရောက်လာ ပြန်သတဲ့ ။
နွား တစ်ကောင် ၊ တဲတစ်လုံး ၊ စားစရာ အနည်းငယ်နဲ့ ကလေး တစ်သိုက်ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ ဟာ ဆင်းရဲချို့တဲ့ ပေမယ့် သဘောထား ကြီးပြီး ရိုးသားတဲ့ သူတွေပေါ့ ။
သူတို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော အိပ်ယာပေါ်မှာ နတ်သား နှစ်ပါးကို အိပ်ခိုင်း ။ ရှိစုမဲ့စု စားစရာလေးတွေကို ဝေမျှ ကျွေးပြီး သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဖြစ်သလို အိပ်ပြီး ရေသောက် ဗိုက်မှောက်လိုက်ကြသတဲ့ ။ နတ်သား နှစ်ပါးကတော့ အိပ်ယာပေါ်မှာ စိတ်လက် ချမ်းသာစွာနဲ့ အိပ်စက်အနားယူလိုက် ကြရတာပေါ့ ။
နောက်တစ်နေ့ မနက် နတ်သားနှစ်ပါး အိပ်ယာထလာတဲ့ အခါ အိမ်ရှင်တွေရဲ့ တစ်ကောင်တည်းသော နွားလေးသေ သွားတာ ကြောင့် ပူဆွေး ဝမ်းနည်းနေတဲ့ အိမ်ရှင် မိသားစုကို တွေ့လိုက် ရသတဲ့။ နတ်သားငယ် လေးဟာ ဝမ်းနည်းနေတဲ့ အိမ်ရှင်တွေ ကိုကြည့်ပြီး….
“ အဘိုး မကောင်းဘူးဗျာ… သဘော မကောင်းတဲ့ အိမ်ရှင်တွေကို ကျတော့ ဂိုဒေါင် ကိုတောင် ပြင်ပေးခဲ့တယ် ။ သဘောကောင်းတဲ့ အိမ်ရှင်တွေကို ကျတော့ နွားကလေး မသေအောင် စောင်မပေးလိုက်တာ မဟုတ်ဘူး ။ သနားလိုက် တာဗျာ ။ ကျွန်တော့် ဆီမှာသာ အဘိုးလောက် တန်ခိုးရှိခဲ့ရင် နွားလေးကို ကယ်ပေးခဲ့မှာဗျ ” လို့ အဘိုး ဖြစ်သူကို ပြစ်တင် စကားဆို လိုက်သတဲ့ ။
အဘိုး နတ်မင်းကြီးဟာ နတ်သားလေးကို ပြုံးကြည့်ပြီး “ ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုအိမ်မှာ အပေါက်တွေဖာ ပေးခဲ့တယ် ဆိုတာ ဂိုဒေါင်ရဲ့ အောက်မှာ မြှပ်ထားတဲ့ ရွှေအိုးတွေကို သူတို့ မမြင်နိုင် တော့အောင်လို့ ငါ့မြေးရဲ့ ။
အဲဒီလောက် လောဘကြီးပြီး သဘောထား သေးသိမ်တဲ့ မိသားစုက ရွှေအိုးတွေကို မပိုင်ဆိုင် သင့်ဘူးလို့ အဘိုး ထင်တယ်လေ ။ ရွှေအိုးတွေ ရသွားတဲ့အခါ သူတစ်ပါး အကျိုးတွေကို ဘာမှလုပ်ဆောင် မပေးမယ့် အတူတူ ရွှေအိုးတွေ မြေကြီးထဲ ရောက်နေတာက ပိုကောင်းတယ် မဟုတ်လား ။
ပြီးတော့ သဘောကောင်းတဲ့ မိသားစုမှာ နွားလေး ဘာကြောင့် သေသွားရတာလဲ ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြမယ် ငါ့မြေး ။ တကယ်တော့ မနေ့ညက အိမ်ရှင်ရဲ့ဇနီးမှာ သေကံ ရှိနေတာကွဲ့ ။
ညသန်း ခေါင်မှာ သေမင်း ရောက်လာတော့ အဘိုးက သဘောကောင်းတဲ့ အိမ်ရှင်မကြီး အစားနွားတစ်ကောင်ကို ခေါ်သွားဖို့ တောင်းဆို လိုက်တယ် ။
သဘောကောင်းတဲ့ အိမ်ရှင်မကြီးအစား နွားကလေး သေသွားတာက သူတို့ မိသားစုအတွက် မသက်သာဘူးလား ငါ့မြေးရေ… ။ တစ်ခါ တလေမှာ ဆိုးဝါးတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်လာတိုင်း ကံဆိုးနေတာ မဟုတ်ပါဘူးနော် ။
ကံဆိုးမှု သေးသေးလေးတွေရဲ့ နောက်မှာ ကံကောင်းမှု အကြီးစားတွေ ရှိနေတယ် ။” လို့ ပြောလိုက်သတဲ့။ နတ်သားလေးကတော့ အဘိုးဖြစ်သူကို လေးစားစွာ ပွေ့ဖက် လိုက်မိတော့တယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူး စက်မှုနည်းေ နတာ ဘာကြောင့် လဲ???(ရုပ်/ သံ)